को पत्रकार ? कस्तो पत्रकारिता ? – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / को पत्रकार ? कस्तो पत्रकारिता ?
को पत्रकार ? कस्तो पत्रकारिता ?
शुरुवात आफै बाट गर्छु– विकट स् थानमा जन्मे  । हुर्कदा युद्धकाल थियो  । शहरबाट गाउतिर मान्छे त जादै नथे भने पत्रिका जाने कुरै थिएन ।
पत्रिका दे ख्नका लागि कवाडवालाको ठे लामा बे लुकीपख खो जतलास गर्नुपथ्योर्  । पाच सात महिना, एक दुई वर्षअघिका पत्रिका हे े नर् पाएर पनि म मक्ख पथेर्र् ं । यद्यपि तिनै धुलो जमे का पत्रिका पढ्दा पनि ले ख्ने रहर चाहि मनमा थियो  । ६० को दशकबाट ले ख्न थाले ं ।
कति अक्षर लालीगुरा“स कापीका पन्नामा बिलाए । कति मनमा नै हराए । युद्ध पनि समाप्त भयो  । म शहर झरें  । ले ख्ने रहर झनै ताजा भयो  । पत्रिका हे र्नका लागि कबाडवालाको ठे ला खो जतलास गर्नुपरे न । पत्रिका आफै बिहानपख ढो का छे उसम्म आइपुग्न थाले  । र, मै ले पनि ले ख्ने कर्मको शुरुवात गरे ं । ले ख्न थाले को आज १५ वर्ष पुगिसके को छ ।
यसबीचमा आले ख, कथा, कविता, समाचार सबै ले खे ं । आफ्नो चे तले भ्याएसम्म ले खे ं । ले ख्दा ले ख्दा आज एउटा मूलधारको पत्रिकामा आबद्ध छु । जिल्लामा पत्रकारिताको नीतिगत तहमा छलफल हुने स् थानको महत्वपूर्ण जिम्मे वारीमा छु ।
पत्रकारिताले नै बिहान साझको जो हो भइरहे को छ । मो फसलमा रहे र एउटा सामान्य मनो भाव भएको पत्रकारले अपे क्षा गर्न सक्ने कुरा प्राप्त भएका छन् । तर पनि एउटा प्रश्नले मनमा सधै ं बिझाइरहन्छ– मै ले के ले खिरहको छु ? र त्यो भन्दा ठूला प्रश्न– म कस् तो पत्रकार हु ? आफै लाई यस् तो किसिमको प्रश्न गर्नु अरु कसै लाई उपयुक्त लाग्ला/नलाग्ला ?
तर मै ले पढे का दर्शन, साहित्य, राजनीति, समाज सबै को एउटै सार थियो – जिन्दगीमा प्रश्न गर्नु र अरु भन्दा पहिले र सबै भन्दा बढी आफै लाई प्रश्न गर्नु । त्यसै ले उल्ले खित प्रश्न बे ला–बे लामा म आफै लाई सो ध्ने गर्छु र नढा“टी भन्नुपर्दा आफै लाई सो धिएका यी प्रश्नहरmको चित्तबुझदो जवाफ अहिले सम्म पनि म आफै ले पाउन सके को छै न ।
को पत्रकार ?
भागवत गीताका अनुसार कुनै पनि प्राणीलाई उसको कर्मले चिनाउछ । पत्रकारका सन्दर्भमा पनि कै यन परिभाषा ले खिएका छन् । पढाइएका छन् ।
हिजो आज त चो क–चो कमा जाने हो भने पाठकले आफनो भो गाइका अनुसार पत्रकारका कै यन परिभाषा निर्माण गरिदिएका छन् । यसर्थमा यी तमामखालका परिभाषातर्फ नगइ कर्मका आधारमा पत्रकारका बारे मा आफ्ना विचार राख्न चाहन्छु ।
पत्रकार, साहित्यकार वा पे शाका पछाडि ‘कार’ प्रत्यय जो डिएका प्रायः मानिस शब्दका सारथि हुन् । जसले शब्दमा आफ्नो पे शागत कला मिसाएर समाज र त्यसका विभिन्न पक्षका बारे मा चर्चा गर्छन् ।
अझ भन्नुपर्दा मानव सम्यताको विकासका लागि शब्दको अपरिहार्य भूमिका रहे को म ठान्छु । यसर्थ यी शब्दका सारथिहरु मानव सभ्यतालाई दिशा दिन सक्ने क्षमता भएका मानिस हुन् । यसले शब्दको कर्म गनेर् को भूमिका समाजका लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
यसै चर्चाबाट पनि के थाहा हुन्छ भने पत्रकार भने को आफू बा“चे को समाजलाई दिशानिदेर् श गनेर् सवालमा आफनो क्षमता अनुसारको भुमिका निर्वाह गनेर् मानिस हो  । कर्मका आधारमा भन्नुपर्दा कुनै पत्रकार चिनारी उसले ले खिरहे को समाचार हो  । कुनै पत्रकारले कुन समाचार ले ख्छ वा ले ख्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरा नै उक्त पत्रकारको पहिचान हो  ।
तर यहा“ उल्टो भइरहे को छ । सम्झदा केही राम्रा समाचार ले खे को सम्झना पनि नआउने पत्रकारलाई हामी पत्रकारमा मात्र सीमित नगरे र ‘चर्चित’ पत्रकारका रुपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा व्यक्त गरिरहे का छौ ं ।
अरुको चर्चा गर्नुपनेर् पत्रकार जब आफै चर्चित हुन थाल्छ, त्यो पत्रकार नभइ अकैर् मानिस भइसक्छ । किनकि पत्रकारलाई राज्यको चौ थो अंग भनिएको आफ्नो चर्चा गर्न नभइ समाज, राज्य, राज्यका विविध संरचनाको चर्चा गर्नका लागि हो  । तिनका सकारात्मक÷नकारात्मक पाटो का बारे मा जनसमक्ष अवगत गराउनका लागि हो  ।
पत्रकारको पहिचानका बारे मा सारमा यति भन्छु– जो सुकै समाचार कर्मका आधारमा नभइ गलत प्रचारका आधारमा पत्रकार मात्र नभएर चर्चित पत्रकारको चर्चामा छ– त्यो खासमा पत्रकार नै है न । र, कसै ले डिजिटल जमाना हो भन्ने तर्क गरे र सामाजिक सञ्जालमा औ पचारिक कार्यक्रमको फो टो र ने ताजीको भाषण राखे र ‘समाचारको कर्म’ गनेर् पत्रकार भनी ठान्छ भने त्यो मिथ्या भ्रम मात्र हो  ।
उसो भए को हो त पत्रकार ? सूचनाको सत्य, वस् तुपरकता, विश्वसनीयता, कार्यगत स् वतन्त्रता, जनहित, तटस् थता, स् वच्छता, जवाफदे हीता आदिलाई बिबिसि एके डे मीले पत्रकारिताका आधारभूत मान्यताहरू भने को छ । यस् ता मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै सर्वसाधारणको हितका लागि कुनै व्यक्ति पत्रकारिताको अभ्यास गर्दछ एवं पत्रकारिता गर्ने सिलसिलामा पत्रकार आचारसंहिता पालन गर्दछ, त्यो पत्रकार हो  ।
हालै को पत्रकारिताबारे एकजना विद्वानको भनाइ छ– ‘बिहान उठ्दा तपाइले समाचार पढ्न पाउनु भएन भने तपाइ अज्ञानी हुनुहुने छ । तर पढ्नुभयो भने तपाइ मूर्ख बन्नुहुने छ ।
तपाइ अज्ञानी बन्ने कि मूर्ख ? त्यो तपाइको रो जाइ हो  ।’ हाम्रो वर्तमान पत्रकारिताप्रति गरिएको यो भन्दा अकोर् ठूलो व्यंग्य अरु हो ला जस्तो मलाई लाग्दै न ।
यो भनाइ अनुसार जो को हीले मूर्ख भन्दा अञ्जान नै बन्नु जायज ठान्ला । तर भनाइको सार पत्रिका नै नपढ्नुस् भन्दा पनि हामीले पाठकलाई के दिइरहे का छौ ं भन्ने तर्फको व्यंग्य हो  । पत्रकारितामा पनि विविध आयाम थपिएका छन् ।
पृष्ठअनुसारका सामग्री र बिट निर्धारण गरिएका छन् । अमे रिकी पूर्वविदे शमन्त्री तथा राष्ट्रपति पदकी प्रत्यासीसमे त रहे की हिलारी क्लिन्टनको भनाइ मलाई याद आउछ । उनले भने की छिन्– ‘मै ले पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा मे रो बारे मा समाचार छपाउन खो जे धे रै के ही गर्नुपदैर् न, कपालको आकार परिवर्तन गरिदिए पुग्छ ।’
यदाकदा हाम्रो पत्रकारिताले उनले भने जस् तै सतही एवं बिक्ने तर नटिक्ने सामग्री पस् िकरहे को जस् तो लाग्छ । खासगरी बिट पत्रकारितामा अहिले सबै को चासो छ । हुनु पनि राम्रो हो  । तर बिट पत्रकारिताको नाममा बिट–बिटमा अल्झिने काम भइरहे को छ । उदाहरणका लागि– प्रहरीका समाचार ले ख्ने पत्रकार आफूलाई ‘क्राइम रिपोर्टर’ भनी चिनाउछ ।
सरकारी निकायको वार्षिक आयव्ययको समाचार ले ख्ने पत्रकार आफूलाई ‘विकास पत्रकार’ भने र चिनाउन उद्यत छ । कृषि कार्यालयले वर्षभरि बाड्ने अनुदान रकमको समाचार ले ख्ने पत्रकार आफूलाई ‘कृषि पत्रकार’ भने र चिनाउछ । मिथ्या आरो प लगाउने पत्रकार आफूलाई ‘भण्डाफो र पत्रकार’ भने र चिनाउछ ।
ने ताको भाषण र पार्टीको घो षणा पत्र सार्वजनिक गरिदिने पत्रकार आफूलाई ‘राजनीतिक बिटको ’ पत्रकार भने र चिनाउ“छ । मै ले यसो भने र समग्र पत्रकारिता नै संश्ले षण गर्न खो जे को पक्कै पनि है न । तर पत्रकारितामा फै लिएको मिथ्या भ्रम र बुझाइबारे मात्र यहा“ उल्ले ख गर्न खो जे को हु“ ।
हुनुपनेर् त क्राइम रिपो र्टर हुनका लागि पुलिसका नभइ पीडितका, विकास पत्रकार हुनका लागि सरकारी निकायको आयव्ययको औ पचारिक आयव्यय भन्दा खर्च गरे वापत त्यसको प्रभावको , कृषि पत्रकार हुनका लागि कृषि कार्यालयको नभइ किसानको , भण्डाफो र पत्रकार हुनका लागि आरो प नभइ तथ्यसंगत भ्रष्टाचार, राजनीतिक बिटको पत्रकार हुनका लागि ने ता र पार्टीको घो षणा नभइ घो षणा पूरा भए नभएको अवस् था ले खिनु आवश्यक छ । यस् तो पत्रकाारिताबारे माओ ले चिनिया पत्रकारिता बारे मा भने का थिए– ‘हाम्रो पत्रकारिता भुत्ते भएको छ । भुत्ते चक्कुले घाउ बनाउदै न ।’
अबका चुनौ ती
डिजिटल संसारले अवसर र चुनौती दुबै थपिएदिएको छ । र, त्यो सगसगै पत्रकार र पत्रकारिता पनि अछुतो छै न । अवसरका रुपमा हे ¥यो भने सूचना संकलनका÷प्रकाशन÷प्रसारणका लागि एक दशकअघि जस् ता अप्ठ्याराहरु छै नन् । गतिलो सूचना स्रो त छ भने क्षणभरमै हाम्रा समाचार जनसमक्ष पु¥याउन सकिन्छ ।
तर दिनदिनका पनि नभई छिनछिनका समाचार बिक्ने जमाना भइसके को अवस् थामा चुनौ तीहरु पनि थपिरहे का छन् । ‘ट्वान्टी वन ले सन फर ट्वान्टी से ञ्चुरी’ नामको आफ्नो किताबमा युवल हरारीले अहिले को युगलाई विचारशून्यता अर्थात ‘निलहिज्म’ को युग भने र परिभाषित गरे का छन् । खासगरी विश्वभर ‘बायो टे क्नो लो जी’ र ‘बायो इञ्जिनियरिङ’ ले विचारशून्यताको अवस् था सिर्जना गरी मान्छे लाई नै स् वचालित मे शिनमा रुपान्तरण गरिदिएको उनको तर्क छ ।
उनी भन्छन्– ‘अब कुनै आइसक्रिम कति मिठो भन्ने कुरा त्यसको स् वादले भन्दा पनि ‘गुगलले ’ निर्धारण गरिदिने भएको छ । गुगलले कुन कम्पनीको सामानलाई सर्च गर्दा सबै भन्दा माथि दे खाउछ त्यही नै राम्रो भन्ने भ्रम उत्पन्न हुने जमाना आएको छ ।’
त्यस्तै उनी अहिले डिजिटल जमानाले सिर्जना गरे को ‘बिग डाटा’ सिस् टमबाट मान्छे लाई कसरी नियन्त्रण गर्न खो जिएको छ भन्ने बारे मा पनि अकोर् तर्क प्रस्तुत गर्छन्– ‘मानिसले दुखाइ महसुस नगदैर् बायो टे क्नो लो जी र बिग डाटा प्रक्रियाले पहिले तिमीलाई यो रो ग लाग्दै छ वा लागिसके को छ भन्ने निर्धारण गनेर् समय आएको छ ।
अर्थात मान्छे ले स् वास् थ्य इतिहासमै सबै भन्दा राम्रो स् वास् थ्य से वा त पाएको छ, तर ऊ जिन्दगीभर बिरामी भइरहने समस् या पनि उत्पन्न भएको छ ।’ मै ले हरारीका तर्क जस्तै ने पालको अवस् था पनि यस् तै भइसके को छ भन्न खोजेको पक्कै पनि है न । यद्यपि हाम्रो डिजिटल पत्रकारिताले पनि यसै गरी कतै न कतै पाठकलाई स् वचालित बनाइरहे को छ । सामाजिक सञ्जाल खो ल्दा सतही र अत्यन्त चर्का किसिमका समाचार भाइरल भइरहे का हुन्छन् ।
डिजिटल प्रविधिका कारण पाठकले सबै भन्दा पहिले त्यही समाचार पढे र आफ्नो धारणा बनाइरहे को हुन्छ । फे सबुकमा जे ले खिन्छ, पढिन्छ त्यही सत्य हो भन्ने बुझाइ बन्दै गएको छ ।
गहिरो अनुसन्धान गरे र ले खिएका लामा समाचार पढ्न पाठकलाई पनि अल्छी लाग्छ । ‘टाइट्ल’ पढे रै धारणा बनाउने वा समाचार सर्च गर्न पाठक भइदिएसी पत्रकारले पनि भित्रको समाचार भन्दा ‘टाइटल’ राम्रो बनाउनलाई नै मे हनत गरिरहे को छ ।
यस् तो अवस् थामा एउटा पत्रकारले कसरी आफ्नो पत्रकारिताबाट समाजसमक्ष सत्य प्रस्तुत गर्न सक्छ ? सतहमा अल्झिने समाज भइदिएपछि गहिरो र लामो अध्ययन अनुसन्धान गरे र ले ख्न रुचाउने पत्रकार र पत्रिका कसरी टिक्नसक्छ ? अबका चुनौ ती यिनै हुन् जस् तो लाग्छ । मै ले यहा यस्तो गर्दा यी चुनौ ती पार गर्न सकिन्छ भने र ले ख्नु उचित ठानिन  ।
किनकि ले खनीको शुरुवात नै मै ले प्रश्नबाट गरे को छु । मे रा प्रश्नले के ही पत्रकारका मनमा के ही मात्र प्रश्न जागृत गराइदियो भने यो ले खनीले सार्थकता पाउने छ । किनकि ज्ञान हुनु र विवे क हुनुमा धे रै अन्तर छ ।
ज्ञानले अरुमा समस् या दे खाउछ । तर विवे कले आफूमा महसुस गराउछ । स्वचालित बन्दै गएका हाम्रा सञ्चारमाध्यम, पत्रकार र पाठकका बीच पत्रकारिताका चुनौ ती समाधान गर्न विवे कको खाचो छ । अज्ञानीहरुको विषयमा त किन शब्द खर्चनु ? किनकि मानिसले जति कम जान्दछ, त्यति धे रै जाने को छु भनी विश्वास गर्र्दछ ।
ओली नेपाल पत्रकार महासंघ दाङको सचिव हुनुहुन्छ
६ मंसिर २०७५, बिहीबार १५:११
Previous: स्मार्ट सिटीमा कालो रात…..
Next: पक्षप्रतिपक्षको भूमिका र आजको अपेक्षा